Ciyaaryahan hore ee kooxda Chelsea ah oo saadaal ka bixiyay mustaqbalka Eden Hazard – Gool FM
(England) 13 Abriil 2019. Ciyaaryahankii hore kooxda Chelsea ee Jimmy Floyd Hasselbaink ayaa saadaaliyay mustaqbalka xidiga reer Belgian ee Eden Hazard, maadaama uu xiiseenayo u dhaqaaqista safka Real Madrid, inta lagu gudi jiro suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda.
Heshiiska Eden Hazard uu ugu biirayo kooxda Real Madrid, ayaa u muuqda mid kaliya u baahan wakhti, maadaama ay sidoo kale Los Blancos si aad ah u xiiseeneyso saxiixa hogaamiyaha xulka qaranka Belgian.
Balse sheekada xiisaha u sii yeeleysa heshiiskan ayaa waxay tahay in Eden Hazard uu si weyn u xiiseenayo la shaqeynta macalinka reer France ee Zinedine Zidane, kaasoo haatan leyliga kooxda Real Madrid.
Hadaba halyeeyga kooxda Chelsea ee Jimmy Floyd Hasselbaink oo ka hadlayay mustaqbalka Eden Hazard ayaa wuxuu yiri:
“Waxaan u maleynayaa in ka hoos ciyaarista Zidane kooxda Real Madrid ee Eden Hazard ay tahay arin suurtagal ah, balse ma hubo waxa Chelsea ay u sameyn karto, si ay ugu dhaadhiciyaan inuu qaato go’aan ka duwan arintaas”.
“Eden Hazard marnaba kuma guuleysan tartanka Champions League waxaana laga yaabaa inuu dareemo inuu heysto fursad wanaagsan uu kula guuleysan karo koobkan kooxda Real Madrid marka loo eego Chelsea”.
“Waxaan rajeynayaa in Barcelona aysan ku guuleysan doonin Champions League” - Vázquez